मुर्झाएको काँग्रेसलाई प्रियंकाले फुलाउलिन्?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मुर्झाएको काँग्रेसलाई प्रियंकाले फुलाउलिन्?
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । बुधवार प्रियंका गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘इलाका’ अर्थात उनको निर्वाचन क्षेत्र वाराणसीमा ¥याली गरिन् । फेब्रअुअरीमा औपचारिक रूपमा राजनीतिमा जोडिएलगत्तै प्रियंका निरन्तर चुनाव प्रचार अभियानमा सामेल भइरहेकी छन् । उनको प्रचारको केन्द्रमा उत्तर प्रदेश राज्य रहेको छ जहाँ बनारस पनि पर्छ । तर के उनका यी प्रयत्नले जारी आमचुनावमा कंग्रेस पार्टीको भाग्यका कुनै फरक पार्ला ?
कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीकी बहिनी प्रियंका गत साता प्रतापगढ नगरको एक मञ्चमा उक्लिदा ‘प्रियंका गान्धी जिन्दावाद’का नारा निकै बेर लागिरहे । उनलाई स्थानीय कंग्रेस नेताहरूले रातो गुलाफका माला तथा सुनौलो ताज पहि¥याइदिए । प्रियंका मञ्चमा उक्लिएपछि उनको सिधा निशानामा प्रधानमन्त्री मोदी रहे । सन् २०१४ को चुनावमा गरिएका वाचा पूरा नगरेको आरोप लगाइन् । मोदी सरकारले रोजगार श्रृजना गर्न नसकेको तथा नोटबन्दीका कारण गरिब तथा साना व्यवसायीको ढाड भाँच्चिएको भन्दै उनले किसानको अधिकार हनन् भएको आरोप पनि लगाइन् । कंग्रेसले चुनाव जिते गरिबका निम्ति रोजगारका अवसर फराकिलो पारिने, ज्याला समयमा तिरिने अनि माध्यमिक शिक्षा निस्शुल्क पारिने उनले बताइन् ।
सो ¥याली नगरको केन्द्रमा रहेको सानो मैदानमा भएको थियो र भिड पनि सानै थियो । तर उपस्थितहरू निकै उत्साही थिए र उनले हिन्दीमा बोल्दा निरन्तर ताली बजिरह्यो । आफ्नो भाषणको अन्तिममा उनले मतदाताहरूलाई कंग्रेसलाई भोट दिन र परिवर्तनका पक्षमा उभिन आग्रह गरिन् । भिडमा उपस्थित २१ वर्षीय विद्यार्थी मिथिलेशकुमार यादवले बताए कि एक युवाका रूपमा उनको चाहना पनि त्यही हो । ‘प्रियंका गान्धी यहाँ परिवर्तन ल्याउन चाहन्छिन् । एक युवाका रूपमा म पनि परिवर्तन चाहन्छु । मोदीका नीतिले मानिसहरूलाई खराब प्रभाव परेको छ, ‘उनले भने ।
कंग्रेस प्रवक्ता अखिलेशप्रताप सिंह भन्छन् दाईलाई सघाउ पु¥याउन तथा पार्टीलाई सशक्त बनाइ मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनौती दिन उनी अगाडि सरेकी हुन् । फेब्रुअरीमा सक्रिय राजनीतिज्ञको रूपमा लखनउमा दाजुसँगै भएको उनको पहिलो सार्वजनिक उपस्थितिका बेला हजारौँ समर्थक सडकमा उत्रिएका थिए । कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले अब कंग्रेस चुनाव जितेर आगामी सरकार बनाउने बाटोमा लम्किएको बताए । त्यसपश्चात् राहुल गान्धीको निर्वाचन क्षेत्र अमेठीमा र उत्तर भारतका गाउँ तथा सहरहरूमा उस्तै दृश्य दोहोरिए ।
स्वाभाविक राजनीतिज्ञ प्रियंका गान्धी हिन्दी तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा दखल राख्छिन् र मानिसहरूसँग, खासगरि महिलासँग, सजिलै जोडिन सक्छिन् । छोटो कपाल र सुतीको सारी पहिरिन रुचाउने उनको शैली उनकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धीसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारतकी एकमात्र महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी एक कडा नेताको रूपमा परिचित छिन् । उनी आफैँ संसदको लागि यसपटक लड्दै छैनन् तर उनको हरेक गतिविधिप्रति सञ्चारमाध्यमको अत्यधिक रूचि देखिन्छ ।
उनको आमाको निर्वाचन क्षेत्र राय बरेलीमा सपेराहरूको गाउँको भ्रमण गदा उनले सर्प समातेको फोटो खिचियो भने मध्य प्रदेशमा सारीमा सजिएकी उनले भिडसँग हात मिलाउन बार नाघ्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले उनलाई पछ्याएको दृश्य देखिए । मठ–मन्दिरमा पुगेर धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गर्ने उनका प्रयासलाई टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहन्छन्, उनको ¥याली टेलिभिजनमा मूल समयमा प्रसारण गरिन्छन् अनि उनले प्रधानमन्त्री मोदीबारे गरेका टिप्पणी मुख्य हेडलाइन बन्छन् ।
उनको परिवारबारे मोदीले गरेका आलोचनाप्रति बढ्दो रूपमा उनले जवाफ दिन थालेकी छन् । मोदीले बरोबर गान्धीका दाजुबहिनी कामको साटो पारिवारिक नामका कारण राजनीतिमा रहेको भन्ने गर्छन् ।
दुई सन्तानकी आमा यी ४७ वर्षीया गान्धी, दाजुको तुलनामा बढी करिश्मायुक्त ठानिन्छिन् । पछिल्ला वर्षमा जब जब कंग्रेसले निर्वाचनमा हार बेहो¥यो तब तब उनले बढ्ता भूमिका बहन गर्नुपर्ने आवाज उठे । सन् २०१५ मा केही कंग्रेस कार्यकर्ताले दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालय बाहिर ‘प्रियंका ल्याउ, कंग्रेस बचाउ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरे ।
त्यसैले जनवरीमा उनलाई उत्तर प्रदेशको पूर्वी भाग हेर्ने जिम्मा सहित पार्टीको महासचिवमा नियुक्त गरियो । समर्थकहरूले पार्टी कार्यालयबाहिर आतिसबाजी र नाचगान गरेर त्यसको स्वागत गरे । उनलाई कंग्रेसको ‘ब्रह्मास्त्र’ समेत भनियो । हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले किन आफूले राजनीतिमा सक्रिय रूपले आउन सहमति दिएको भन्ने बारे बताएकी छन् । ‘प्रजातन्त्र, संविधान र हाम्रा संस्थाहरू आक्रमणमा परेका छन् र यस्तो बेला राजनीतिमा नहोमिनु भनेको कायरता हुने थियो ।’
उनले भनेकी छन्, ‘सन् २०१७ मा पनि राहुलले मलाई उत्तर प्रदेश हेर्न भनेका थिए तर मैले मानिन । त्यो गल्ती थियो । गल्तीबाटै मानिसले पाठ सिक्न हो । त्यसैले यसपालि उनले फेरि सोध्दा मैले हुन्छ भनेँ ।’
प्रधानमन्त्री मोदीले बारम्बार गान्धी दाजुबहिनीको खिल्ली उडाउँछन् । परिवारको नामका कारण नकि कुनै उपलब्धिका कारण उनीहरू नेतृत्वमा रहेको भन्ने गर्छन् । कंग्रेस समर्थकहरू भने यो परिवारवादबारे खासै चिन्तित देखिँदैनन् । उनीहरूका हजुरआमा तथा बुबाको हत्या गरिएको र उनीहरूले देशका लागि ‘बलिदान’ दिएको चर्चा समर्थकहरू गर्छन् ।
प्रवक्ता सिंह भन्छन् राहुल र अब प्रियंकाले पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिएका छन् । सिंह भन्छन् जसरी उनले कार्यकर्ता र आमजनतामा विश्वास जगाएकी छन् त्यो नै महत्त्वपूर्ण हो । तर के यो सब समर्थन वास्तवमै भोट वा पार्टीको सिटमा परिणत होलान ? ‘निश्चय नै,’ सिंह भन्छन्, ‘जब मतगणना हुन्छ तब तपाईँले देख्नुहुनेछ कसरी हाम्रो मत प्रतिशत बढ्नेछ भनेर ।’